GOODAX OO GANAFKA KU DHUFTAY XILDHIBAANO ISBAARO U DHIGTAY HAY ADAHA AMAANKA | Saadaal Media
GOODAX OO GANAFKA KU DHUFTAY XILDHIBAANO ISBAARO U DHIGTAY HAY ADAHA AMAANKA
Waxay umada soomaaliyeed,reebaysaa taariikh cad nin waliba dalkiisa meesha uu kagalo ayaa lagu xasuusan laguna xusi lagauna tix galin. hadaba nin walboo siyaasada soomaaliya soo galaa laba mid unbuu noqdaa oo kala ah sidan hoos ku qoran
1.Nin yeesha tariikh madaw oo ah mid dalkiisa khiyaana cadawna u ah diinta dadka iyo dalka
2.Nin wadani ah jecel diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa kana shaqeeya hormarkooda iyo sharafkooda iyo dawlad nimadooda
Hadaba sharaf xumada iyo xumaanta aad samaysaa iyo dawladnimada oo aad ka hortimaadaa waxay keentaa wax firsada ubadkaaga kuuna xun adiga aduun iyo aakhiraba. haaad wanaag fashana waad liibaani aduun iyo aakhiro faracaaguna way u aayayaan wanagaas.
Hadaba dalkan soomaaliya dadkii lahaa baa isha ku haya,kuna xisaabtamaya nin walbaa wuxuu falo,waana mid meel u taal laguna xisaabtami doono. waxaa hadaba haboon in la feejignaado khayrkana laga shaqeeyo oo sharafta la ilaashado.Hadaan intaa kagudbo.
Wasiir goodax waa nin ah aqoon yahan,ahna dhal magaalo garanaya waxa dawladnimo tahay,cida hortaagan dalkeena in uu dawlad nimo hana qaada yeesho,caqabadaha hortaagan caasimada dalka soomaaliyeed in ay noqoto amaan sida caasiamdaha aduunka oo kale. Wasiir goodax wuu ka run sheegay difaaca dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa soomaaliyeed.isagana sharaf bay u tahay abaal iyo taariikh ay u hayso umada soomaaliyeed aduunka korkiisa aakhirana ninka xumaanta reeba qabta ka hortagaa waa ehlu janno siday diinteenu inagu tiri oo aan rumaysanahay.
Waxaad soomaaliyeey ogtihiin in dalkeenu ku jiro dagaal culus oo uu kula jiro cadaw isbiirsaday oo ah mid dibada ah iyo mid gudaha ah midka gudaha ayaana halis ku ah jiritaanka soomaaliya. waxaynu wada ogsoonahay in aysan mudo yar ahayn inta dawladnimadii dalka soomaaliyeed maafiyo caalami ah u af duubantahay,waa mudo sodon sanadood ah.
Bilihii u danbeeyay,waxay shabakada maafiyada ah( waa 3 qolo iyo shisheeye maal galiya,waa kuwo ku gabada xildhibaano ama siyaasi dadkuna u yaqaan siyaasiinta xanaaqsan oo ay gadh wadeen u yihiin madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh,fiqi,odowaa,mahad salaad,cabdishakuur , kooxda labaad oo ah kuwo ku gabada ganaacsatada oo suuqa bakaaraha dhex jiifa iyo kooxda labada wji leh ee marna afka duubta marna iska dhiga ciidan qaran,kuwa afraad waa dawladaha shisheeye sida Emaraatka iyo kuwo kale oo bakaaraha keena lacagta lagu ciqaabo shacabka mogdisho) kawadeen dalkeena weerar cadawnimo oo lagu xasuuqay shacabka Mogdisho gaar ahaan.
Kooxdan isbiirsatay ee ah shabakad maafiyo caalami ah ayaa dawladaha shisheeye hadafkoodu yahay mid guracan oo cadaw u ah dadka soomaaliyeed sidaa ayay usiinayaan malaayiin dollar oo dalkeena lagu halaago wakiiladooda soomaaliya gudaha u jooga,dalwaliba wuu leeyahay cadaw dibada ah.
Qoladan soomaalida ah sida siyaasiyiinta xanaaqsan iyo kuwan afka duuban iyo ganaacsatada bakaaraha iyaga hadafkoodu waa in ay helaan lacag dollar ah oo kaliya,waxayna dagaal adag uugu jiraan in dalka aysan ka dhalan dawlad kadibna aysan waayin lacagaha dollarka ah ee ay ka helaan shisheeyaha. dawladnimada ayay cadaw ku yihiin tani waxay keentay in markii dawladeenu qaaday weerar cad oo ay ku wajahayso shabaabka in laga gaaray dagaalkaas guulo waaweyn dawlada soomaaliyeedna ku adkaatay hawlgaladaas culus.
Markay arkeen in shabaab lagu jabiyay mogdisho dhexdeeda,gododkay hubka ku qarsadeena shacabku soo sheegay kadibna la soo saaray, markay arkeen shabeeladaha hoose in gododkoodii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uugu galay oo cagta la mariyay,markay arkeen in shabeelada dhexe laga saaray meelo badan laguna raad joogo,markay arkeen jabka iyo halaaga haysta shabaab,ayaa shabakada mafiayda caalamiga ahi shir dagdag ah yeelatay.
Shirkaa waxaa lagu go aamiyay in la dhigo shirqool ka dhan ah hay adaha amaanka madaxdooda usaraysa si loo hakiyo weerarada iyo baacsiga shabaab kusocda oo qarka u saraan in dalkaba laga saaro hada. waxaana halis ah bay yiraahdeen in shabakada caalamiga ahi kaa furfurato oo baabado. si taa looga hortago waa in lahelaa maalgalin fiican Emaraatku bixiyaa waana ay aqbaleen,ganaacsatada bakaaraha waa in ay gudbiyaan qaybinta lacagta wayna aqbaleen,xildhibaanada ayaa laga rabaa in ay fuliyaan shirqooka ah in baarlamaanka marsiiyaan in shir loofariisto suaalana lagu waydiiyo saraakiisha iyo hogaanka sare ee amaanka kuwaas oo laxariira hawsha lagu baacsanaayo shabaab!
Waxaa dhinac socday qoshe kale oo ah in saxaafada xorta ka ah dalka soomaaliyeed iyo dawladiisaba! waa siday u qanaane looyeero si ay ugudbiyaan xogtaa lagu fashilinaayo sirta dawlada soomaaliyeed. Waxaad maanka ku haysaan dadka kan uugu doqon sana uu garan karayaa in dal dagaal ku jiraa oo cadaw gudaha ah kula jira iyo mid dibadeedba oo hore u bixiyay ogaysiiskaas iyo bayaankaas in arimaha noocaan oo kale ah baarlamaanba la keeni karayn xalada lagu jiro awadeed.
SHirqoolkan abaabulan ee dibin daabyo,laguna curyaaminaayay si qorshaysan oo kutala gal ah in lagu garbaduubo oo loo dhigto isbaaro hay adihii amaanka dalka ee dagaalka kula jiray cadawga oo lawada ogaa inay kujiraan dagaal ayaa waxaa fulinaayay garabka shabakada maafiyada ah ee dhex jiifta baarlamanka soomaaliyeed nasiib xumo. waxayna ahayd mid lagu wiiqayo guulaha hayadaha amaanka dalkeenu ay gaareen iyo ka adkaanshaha ay ka adkaadeen shabaab oo ah cadaw soomaaliyeed.
waxay ahayd mashquulin si culayska dagaalku uuga yaraado shabaab,waxay ahayd baas abuur baarlamanka dhexdiisa.xiligay kusoo beegeen waad aragtaan. hadaba shirqoolkaa soomaali loo dhigay waxaa ganafka ku dhuftay oo dalkiisa badbaadiyay waayo arag ruug cadaa ah oo aan loo gaban karayn waa xildhibaan goodax oo burburiyay guud ahaan shirqoolkaas cadawgu usoo dhiibay kuwa hada banaanka yaala ee ah cadaw dhex jiifa baarlamanka.
Laba guulba waa helay cadawgeena midabkoodii runta ahaa oo aan gacan ku hayno maanta.shabakadii maafiyo oo aan ku raad joogno iyaga iyo cidkastoo uu raad soo galo oo ku lug yeelata faldanbiyeedkaa qaran.Baarlamanka soomaaliyeed waabaa u baryay waana waajib in uu digtoonaadaa dalkana badbaadiyaa, waana ku mahad sanyihiin shaqada hada socota ee dalka lagu badbaadinaayo.
Hay adaha amaanka qaranka waa in ay shaqadooda qabsadaan gaar ahaan hay ada nabad sugida soomaaliyeed waa in ay dabagalaan taleefanada iyo ciday la xariiraan iyo shirhoosaaadyada beelaysan ee dalka lagu duminaayo kuwa wada iskana dhigaaya xildhibaan qaran iyo siyaasi. qodobka uugu yar ee ugu fudud waa dil ninkii sirta dalka si toos ah iyo si dadban ubixiyaa.dawlada soomaaliyeed waa in ay qabataa kuwa sirta dalka faraha kula jira ee gudbinaaya. sir doonku waa in uu ogyahay waxa ka socda baarlamaanka dhexdiisa loo ogyahay qof qof iyo halkuu ku xiran yahay ee xiriirka uu laleeyahay maxaa loo yiri nabad sugida qaranka?
Qofkastoo wadani ah xilbaa kasaaran dalkiisan halaagsamay ee dawlad la aanta ah mudo nusqarni ah waana ceeb iyo foolxumo aduun damiirkuna ma ogolaanayo diinteenuna maba ogola in la ahaado dawlad la aan oo waxay tiri dawlad xun ayaa dhaanta dawlad la aan. waa in dalkeena aan u hurnaa nafteena dilaa cadawga na dilaya ee shacabkeena xasuuqaya har iyo habeenba.waa dilaynaa cidkastoo ka hortimaada in soomaaliya ay hesho dawlad nabad iyo nolol waana u gaaranaynaa!! ehlu naarkaas.